Yeremiya 37 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
37 UKumkani uZedekiya+ unyana kaYosiya+ walawula esikhundleni sikaKoniya+ unyana kaYehoyakim,+ lowo uNebhukaderetsare ukumkani waseBhabhiloni wamenza ukumkani kwilizwe lakwaYuda.+ 2 Yena nabakhonzi bakhe nabantu belizwe abazange bawaphulaphule amazwi kaYehova+ awawathethayo ngoYeremiya umprofeti.+ 3 UKumkani uZedekiya wathumela uYehukali+ unyana kaShelemiya noZefaniya+ unyana kaMahaseya+ umbingeleli kuYeremiya umprofeti, esithi: “Khawuncede, sithandazele kuYehova uThixo wethu.”+ 4 UYeremiya wayengena ephuma phakathi kwabantu,+ njengoko babengamfakanga endlwini yamabanjwa. 5 Kwakukho nomkhosi wamajoni kaFaro owawuphuma eYiputa;+ namaKhaledi awayengqinge iYerusalem ayiva ingxelo engawo. Ngoko emka eYerusalem.+ 6 Landula ke lafika ilizwi likaYehova kuYeremiya umprofeti, lisithi: 7 “Utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli ukuthi, ‘Nifanele nithi kukumkani wakwaYuda, lowo unithumele kum ukuza kubuza kum:+ “Khangela! Umkhosi wamajoni kaFaro oza kuni ngenjongo yokuninceda kuya kufuneka ubuyele elizweni lawo, eYiputa.+ 8 AmaKhaledi ngokuqinisekileyo aya kubuya, alwe nesi sixeko, asithimbe aze asitshise ngomlilo.”+ 9 Utsho uYehova ukuthi: “Musani ukuyikhohlisa imiphefumlo yenu,+ nisithi, ‘Nakanjani na amaKhaledi aya kumka kuthi,’ ngenxa yokuba akayi kumka. 10 Kuba ukuba beniwuxabele wonke umkhosi wamajoni wamaKhaledi alwayo nani+ kuze kusale phakathi kwawo amadoda ahlatyiweyo,+ ebeya kuvuka nganye ententeni yayo aze asitshise esi sixeko ngomlilo.”’” 11 Kwathi ekumkeni komkhosi wamajoni wamaKhaledi eYerusalem+ ngenxa yomkhosi wamajoni kaFaro,+ 12 uYeremiya waphuma eYerusalem waya kwilizwe lakwaBhenjamin+ ukuya kufumana isahlulo sakhe apho phakathi kwabantu. 13 Ngoko kwathi xa wayeseSangweni lakwaBhenjamin+ igosa eliphethe ubuveleli, eligama lalo lalinguIriya unyana kaShelemiya unyana kaHananiya, lalilapho. Kwaoko lambamba uYeremiya umprofeti, lisithi: “Uphambukela kumaKhaledi!” 14 Kodwa uYeremiya wathi: “Bubuxoki obo!+ Andiphambukeli kumaKhaledi.” Kodwa alizange limphulaphule. Ngoko uIriya wambamba uYeremiya waza wamzisa kwiinkosana. 15 Iinkosana+ ke zamcaphukela uYeremiya,+ zambetha+ zaza zamfaka endlwini yamakhamandela,+ endlwini kaYehonatan+ unobhala, kuba yiyo le ezaziyenze indlu yamabanjwa.+ 16 Akuba uYeremiya engenile endlwini yequla+ nakumagumbi angaphantsi, waqhubeka ke uYeremiya ehlala apho imihla emininzi. 17 UKumkani uZedekiya wathumela, wamthabatha, waza ukumkani waqalisa ukumbuza imibuzo endlwini yakhe emfihlekweni.+ Yaye wahlabela mgama wathi: “Likho na ilizwi elivela kuYehova?” Wathi ke uYeremiya: “Likho!” Waza ngokubhekele phaya wathi: “Uya kunikelwa esandleni sokumkani waseBhabhiloni!”+ 18 Wandula ke wathi uYeremiya kuKumkani uZedekiya: “Ndikone ngayiphi na indlela wena nabakhonzi bakho nesi sizwana,+ ukuze nje nindifake endlwini yamabanjwa? 19 Baphi na abaprofeti bakho abakuprofetelayo, besithi, ‘Ukumkani waseBhabhiloni akayi kuza nxamnye nani nanxamnye neli lizwe’?+ 20 Ke kaloku khawuncede, uphulaphule, nkosi yam kumkani. Ngamana ukuzicelela kwam ubabalo,+ kungawela phambi kwakho, uze ke ungandibuyiseli endlwini kaYehonatan+ unobhala, ukuze ndingafeli apho.”+ 21 Ngako oko uKumkani uZedekiya wawisa umyalelo, baza ke bamfaka eluvalelweni uYeremiya kwiNtendelezo Yabalindi;+ kwaye wayenikwa isonka esibusazinge mihla le esivela kwisitrato sababhaki,+ de saphela sonke isonka esixekweni.+ UYeremiya waqhubeka ehlala kwiNtendelezo Yabalindi.+